Havaray မော်ကွန်း - ထို rayhab
စီစဉ်ထားတဲ့တစ်လိုင်းပြေးရထားများအကြား Gaziemir သစ်ကိုပွဲခင်း (ကုန်သွယ်ရေး Izmir) တွင် 2016 နှင့်အတူ Izmir Gaziemir ESBAS ဆင်ခြေဖုံးဘူတာရုံသမ္မတအာဇစ် Kocaoglu ၏ပထမနှစ်အတွင်းကသမ္မတသစ်Tunç Soyer နှင့်အတူပြန် Fore သို့ရောက်ကြ၏။ Izmir တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် [ပို ... ]
အဆိုပါဘူမိဗေဒဌာန, အင်ဂျင်နီယာပါမောက္ခဌာနကနေအနားယူတဲ့သူတသောင်းရှစ်မတ်လÇanakkaleတက္ကသိုလ် (ÇOMÜ), ဒေါက်တာ DoğanPerinçek, လူမှုရေးမီဒီယာအတွက်မြို့များအတွက်အဆိုပြုစီမံကိန်းအာရုံကိုဆွဲငင်။ အဘယ်သူသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာပါမောက္ခများမှတဆင့်မိမိအဝေစုနှင့်အတူနာမည်တစ်ခုလုပ် ဒေါက်တာ DoğanPerinçek, [ပို ... ]
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလွှဲပြောင်းစင်တာဖြိုဖျက်ခံရဖို့ 11 တူရကီအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာတရားရုံးသည်တူရကီတရားရုံးဆန့်ကျင်သည်၎င်း၏တရားစွဲဆိုမှုအတွက်ဗိသုကာတူရကီဘဏ်ခွဲကုန်သည်ကြီးများအသင်း, ကွပ်မျက်အမိန့်ကိုပေး၏။ ဗိသုကာတူရကီဌာနခွဲဆုံးဖြတ်ချက်, ဒေသခံရုံးမှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုတားဆီးသောအစီအစဉ်ကိုပြင်ဆင်ရေး၏ "လျော်ကြေး၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်း [ပို ... ]
တစ်ရထားလမ်း Option အ Metro CHP တူရကီဒုတိယ Nihat အစိမ်းရောင်, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုင်းများထက်လျော့နည်းကုန်ကျခြင်းနှင့်အထူးသဖြင့်အလွယ်တကူတူရကီအတွက်တစ်လိုင်းပြေးရထားပို့ဆောင်ရေးသည် Modes နှင့်တင်ဒါနှင့် ပတ်သက်. တူရကီအတွက် Metro နှင့်အတူပေါင်းစည်းနိုင်ညွှန်ပြ Havaray [ပို ... ]
"ပို့ဆောင်ရေး" နှင့် "သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး" အကြားအခြို့သောကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်။ တူရကီဒုတိယ Nihat အစိမ်းရောင်; "သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်း" ဇုန်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည်ပညတ်တရား၏အချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်သို့မဟုတ်အယူအဆမဟုတ်ပါဘူး။ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Master Plan ကိုမြို့အတွက်အခွင့်အာဏာရှိသည်, မြို့ပြစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအချက်နှင့်အတူမြို့တော်မြူနီစီပယ် [ပို ... ]
လက်ရှိဆောက်လုပ်ရေးကျော်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်Mevlüt Uysal Küçükçekmeceခြောက်လ otapark စတုရန်းမီတာတစ်ပန်းခြံအဖြစ်အသုံးပြုပါလိမ့်မည်5တထောင်ကျော်ကသုံးသပ်စီမံကိန်းများအားဖြင့်ဂျာနယ်လစ်မှသတင်းအချက်အလက်များအားပေးတော်မူ၏။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Uysal လည်းယခင်ကSefaköyစီစဉ်ထား [ပို ... ]
ခြောက်လ otapark ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေး 15 သုံးပါလိမ့်မည်သည့်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်Mevlüt Uysal Küçükçekmece, တထောင်စတုရန်းမီတာ bulunarak စာနယ်ဇင်းမှအဆောက်အအုံအတွက်ပန်းခြံရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်သတင်းအချက်အလက်ကိုပေး၏။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Uysal လည်းယခင်ကSefaköyစီစဉ်ထား - Esenyurt [ပို ... ]
Sefaköy-Başakşehir havaray စီမံကိန်းကိုဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။ အစားမြေအောက်ရထားနှင့်အလင်းရထားလမ်းစနစ်၏ Havaray အကောင်အထည်ဖော်ပါလိမ့်မည်။ ပို့စ် Kadir Topbas Sefaköy-Başakşehir havaray System ကို left တဲ့သူကသမ္မတ Tayyip အာဒိုဂန်၏နှုတ်ထွက်စာအားဖြင့်သတိပေးခံရခံရပြီးနောက်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM) ကသမ္မတ Mevlut Uysal, [ပို ... ]
ဆင်းရဲဒုက္ခအစ္စတန်ဘူလ်နောက်ဆုံး Sprint ရှူဖို့ဆက်လက်သက်သာရာလိမ့်မည်ဟု traffic များနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ။ လုပ်. အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေးနှစ်ပေါင်းဆေးတစ်လက်တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာမတွေ့ရှိနိုင်ပေနေသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်အတူမီဂါမြို့ဟာအသွားအလာပြဿနာဖြေရှင်းရေးမှာရည်ရွယ်သည်။ ဤ [ပို ... ]
Havarayl သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Metro မှ Vadistanbul
စျေးဝယ်စင်တာ Vadistanbul စီမံကိန်းတွင်ဧည့်သည်များမှ၎င်း၏တံခါးများဖွင့်လှစ်။ အဆိုပါ 103 270 အပေါ် Artas အဆောက်အအုံနှင့်ဆောက်လုပ်ရေး Invest မိတ်ဖက်ဖို့တထောင်စတုရန်းမီတာပိုင်မြေပေါ်တွင် Evyap Holding ကုမ္ပဏီအကောင်အထည်ဖော်သည့်စျေးဝယ်စင်တာစတိုးဆိုင်များတွင်တည်ရှိသည်။ လယ်ပြင် off အဖြစ်စီမံကိန်းများကို [ပို ... ]
Havaray '' ချိုင့်မှပယ်သတ်မှတ်
ကမ္ဘာ့အရေးအပါဆုံးအိမ်ခြံမြေနှင့်ဗိသုကာ 2017 အစည်းအဝေးနပေုံကို Global များထဲမှစဉ်းစား, ဒူဘိုင်းအတွက်၎င်း၏တံခါးများဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ကမ္ဘာ့အရေးအပါဆုံးအိမ်ခြံမြေနှင့်ဗိသုကာ 2017 အစည်းအဝေးနပေုံကို Global များထဲမှစဉ်းစား, ဒူဘိုင်းအတွက်၎င်း၏တံခါးများဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုနှစ် xnumx'inc [ပို ... ]
Sefaköy-Halkalıနုရဲ့ start Remove -Başakşeh havaray
ယင်းနောက်တဖန်တင်ဒါထွက်သွားကြဖို့ရှိမရှိပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်မှနှစ်ခုကိုသီးခြားစီမံကိန်းများအတွက် Havaray စီမံကိန်းကို။ အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့ပထမဦးဆုံး havara များအတွက်တင်ဒါများကြောင့်ခရီးစဉ်များနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များတဲ့ပြောင်းလဲမှုဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။ နှစ်ခုစီမံကိန်းများနှင့်အတူပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောစီမံကိန်းကို havaray ခေ [ပို ... ]
Sefaköy-Halkalı-Başakşehနု havaray cancel ပါလိမ့်မယ်
Alarko Holding ကုမ္ပဏီSefaköy-Halkalı-Başakşeh Electro-စက်မှု havaray လိုင်းဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်ပါသည်, သတင်းများအရနုဖျက်သိမ်းနုကောင်းသောအမှုနှင့်အသုံးအဆောင်များပစ္စည်းဝယ်ယူရေးနှင့် ပတ်သက်. ကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဘီလီယံခန့်နှုန်း 1 292 သန်းနှင့်အတူ Alarko နုအတွက်အမြင့်ဆုံးလေလံပေးထားခဲ့သည်။ Alarko [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် 2019 ခုနှစ်တွင်ရထားလမ်းအတွက်ဝန်ဆောင်မှုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ကျဉ်းမြောင်းသော gauge လိုင်းများ havaray စီမံကိန်းကိုအာရုံကိုဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ အတူတကွမက်ထရိုရထားလမ်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါငျးတို့သခရိုင်နှင့်အတူ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြတ်တောက်နေစဉ်မြန်နှုန်း၏အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်စနစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ရည်ရွယ်သည်။ IMM ဒီ [ပို ... ]
ဗိသုကာတူရကီဘဏ်ခွဲတူရကီကုန်သည်ကြီးများအသင်းအတွက်တစ်လိုင်းပြေးရထားစနစ်၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးမည်မဟုတ်တို့နှင့်ကြီးသောကုန်ကျစရိတ်ဆောင်ခဲ့ဦးမည်ဟုသူကဆိုသည်။ တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်မကြာသေးမီကအသားစားကြက်မွေးမြူရေးနှင့်တစ်ဦးတစ်လိုင်းပြေးရထားစနစ်၏ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေးအတွက် Bilkent မြို့ဆေးရုံဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူ access ကိုပေး [ပို ... ]
ပထမဦးဆုံး4ကုမ္ပဏီအတွက်အစ္စတန်ဘူလ် havaray နူးညံ့ Kal မသန်စွမ်းခဲ့
နိမ့်ဆုံး4ကမ်းလှမ်းမှုကို Alsim Alarko နှင့် Dogus İnşaat'lအတူနူးညံ့စေပထမဦးဆုံး havaray ကန့်ကွက်စုစုပေါင်း2ကုမ္ပဏီအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်နှင့်အတူ disabled တည်းခိုပြီးနောက်အစ္စတန်ဘူလ်:4ကုမ္ပဏီကိုပထမဦးဆုံး havaray နူးညံ့သောအစ္စတန်ဘူလ် disabled ခဲ့သည် [ပို ... ]
Maltepe Metro နှင့် havaray ၏နယူးလိုင်းလာ
နယူး Maltepe Metro ၏ Line နဲ့လာ havaray: အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Kadir Topbas သူ Maltepe ၌ငါ့ edited ချီတက်ပွဲအတွက်နိုင်ငံသားများနှင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အဆိုပါဆန္ဒပြပွဲကိုဖြေရှင်းရန်နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်အတူသူတို့လက်၌တူရကီအလံ, Kadir Topbas, Maltepe ပု, 13 နှစ်ကာလအတွင်းဖြည့်ပါ [ပို ... ]
တူရကီ၏ပထမဦးဆုံး Havara: အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Kadir Topbas Metro ဘယ်နေရာမှာမဆိုနေရာတိုင်းတူရကီ၏ပထမဦးဆုံးမြေအောက်ရထားစီမံကိန်းအခြေအနေတွင်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်စတင် Havara ။ Esenyurt ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးလိမ့်မည်သည့် Kucukcekmece Sefaköy havaray နူးညံ့။ သဘောတူညီချက်စင်မြင့်ပေါ်ရောက်ရှိလျက်ရှိသည်။ ဆောက်လုပ်ရေး [ပို ... ]
Sefaköy-HalkalıAlarko havaray လိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်-Başakşehနုအနိုင်ရ
Sefaköy-HalkalıAlsim, Alarko Holding ကုမ္ပဏီ၏လက်အောက်ခံ, Alarko စက်မှု်ဆောင်မှုများနှင့်ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီSefaköy-: Alarko အဆိုပါ-Başakşeh havaray လိုင်းများအတွက်တင်ဒါအနိုင်ရHalkalıလိုင်း havaray နူးညံ့-Başakşehနုအနိုင်ရအများဆုံးအကျိုးရှိလေလံပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ KDV မှလွဲ. ဟုတင်ဒါကမ်းလှမ်းမှုကို၏ကုန်ကျစရိတ်, [ပို ... ]
Sefaköy-Halkalı ကုမ္ပဏီများ havaray ၏တင်ဒါဧရိယာကြေညာလိုက်သည်
Sefaköy-Halkalı Havaray အဆိုပါတင်ဒါဧရိယာကုမ္ပဏီကြေညာလိုက်သည်: အစ္စတန်ဘူလ် Kadir Topbaş 2019 ဖွင့်လှစ်သည့် havaray မှသတငျးကောငျးကိုပေး၏။ AK ပါတီသမ္မတအိမ်တော်Büyükçekmece SKM 1 ဘီလီယံခန့်ကျော်ကုန်ကျသည့်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Kadir Topbas ၏ဖွင့်ပွဲမှာမိန့်ခွန်းလုပ်ဆောင် [ပို ... ]
ဥရောပအာရှရထား 2017 တရားမျှတသောလာရောက်လည်ပတ်သူများရန်၎င်း၏တံခါးပေါက်ဖွင့်လှစ်
2017: ဥရောပအာရှရထား7တရားမျှတသောလာရောက်လည်ပတ်သူများရန်၎င်း၏တံခါးပေါက်ဖွင့်လှစ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရထား, အလင်းရထား, အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပြပွဲ-တရားမျှတသော Eurasia ရထား 2017 02 2017 မတ်လအတွင်းအစ္စတန်ဘူလ်ကုန်စည်ပြပွဲ Center မှာဖွင့်လှစ်။ အစ္စတန်ဘူလ်ကုန်စည်ပြပွဲ Center မှာဖွင့်ပွဲ, ပို့ဆောင်ရေး, သင်္ဘောများနှင့် [ပို ... ]
ဥရောပအာရှရထား 2017, 70 10 တိုင်းပြည်ကနေတထောင်ဧည့်သည်များထိတွေ့ဆက်ဆံမှုဖို့အဆင်သင့်လာပြီဖြစ်ပါတယ်: ဥရောပအာရှရထား 2017, 70 10 နိုင်ငံထိတွေ့ဆက်ဆံရတဲ့အလည်လာသူများထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြင်ဆင်! မတ်လ24 2017- နေ့စွဲအတွက်အစ္စတန်ဘူလ်ကုန်စည်ပြပွဲစင်တာကျင်းပလိမ့်မည်သည့်ဥရောပအာရှရထား; တိုင်းပြည်ကနေ 30 300 [ပို ... ]
ဥရောပအာရှရထား, ပထမဦးဆုံးနှင့်သာ Eurasian ဒေသကြီးမီးရထားတရားမျှတသော၏
ဥရောပအာရှရထားဥရောပအာရှဒေသကြီးပထမ၏မီးရထားနှင့်သာလျှင်တရားမျှတသော: ဥရောပအာရှ, ဥရောပအာရှရထားအတွက်ဒေသတွင်း၌တစ်ခုတည်းသောပြပွဲဖြစ်ခြင်းမှာလည်းကမ္ဘာ့3ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအကြီးဆုံးရထားလမ်းပြပွဲဖြစ်ခြင်း၏ဂုဏ်ထူးဖြင့်သမုတ်သော။ အဆိုပါ 20177၌တည်၏။ ဥရောပအာရှတစ်ကြိမ်ကျင်းပလိမ့်မည် [ပို ... ]
မီးရထားကဏ္ဍ Eurasia ရထားမှာအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်တွေ့ဆုံ: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရထား, အလင်းရထား, အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပြပွဲ - မတက်ရောက်နိုင်ငံများမှ Eurasia ရထားတရားမျှတသော 30 300 အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ကုမ္ပဏီများဖြစ်ကြသည်။ အစ္စတန်ဘူလ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရထား, အလင်းရထား, အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး [ပို ... ]
Sefaköy Halkalı လိုင်းBaşakşehir havaray တင်ဒါ (အထူးအစီရင်ခံစာ) ထုတ်ပေးခဲ့သည်
Sefaköy Halkalı လိုင်းBaşakşehir havaray နူးညံ့ထုတ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်: Sefaköy-Halkalıအဆိုပါ 15 ခုနှစ်တွင်လိုင်း-Başakşehအရှည် havaray အတွက်ကီလိုမီတာ 17 ဘူတာရုံထားရှိရေးပါလိမ့်မယ်။76 ဖိုင်တွေလေလံဆွဲကြအများအပြားကုမ္ပဏီများနှင့်ကုမ္ပဏီများတက်ရောက်နု၏ရလဒ်စာမေးပွဲအပြီးဖြန့်ချိလိမ့်မည်။ TC အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, ရထား [ပို ... ]